WidhWidh Online » News » Baarlamaanka Soomaliya oo maanta Su’aalo Weydiiyay Labo Wasiir oo ka Tirsan Xukuumada Soomaliya
5:20 pm » Ra’iisul Wasaare Saacid “Qaraxyada Fulaynimada Ah Nagama Hor Istaagayaan Dib U Soo Celinta Nabadda.” 4:39 pm » Danmark oo sheegtay in ay ka fiirsaneeyso dib u celinta qaxootiga Soomaalida dalkeeda ku sugan 4:33 pm » Ninkani Balan-qaad ayuu u sameeynayaa Qofkii Shaqo usoo hela!! (Muxuu balan qaaday?) 2:37 pm » Halkan Ka Daawo Weerarkii Xarunta UNDP(Daawo Video) 2:30 pm » Waa Mise Tirada Shacabka ee ku Geeriyootay weerarka ka dhacay Muqdisho(Halkan Ka Dhagayso) 2:23 pm » Islamists say behind U.N. compound attack in Somalia 2:20 pm » Maxuu Ka Yidhi Gudoomiyaha Baarlamaanka weerarkii Xarunta UNDP 2:17 pm » Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha Ka Dhashay Weerarka UNDP(Daawo Sawirada) 2:06 pm » Ban ‘shocked’ over UN office attack in Somalia 1:58 pm » DEG DEG: Wasiirka Arrimaha Gudaha oo sheegay in 8 Saraakiil oo Ajnabi iyo Soomaaliba lagu dilay weerarka UNDP Baarlamaanka Soomaliya oo maanta Su’aalo Weydiiyay Labo Wasiir oo ka Tirsan Xukuumada Soomaliya Published on Dec 11 2012 // WARAR, Wararka Somalia ShareBaarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxaa hortagay wasiiro ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya kuwaasi oo su’aalo lagu weydiinaye halkaasi.
Kulanka oo ahaa mid su’aalo lagu weydiinaye wasiirada kala ah wasiirka gaashaandhiga Xukuumadda Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaare ku xigeen ahna Wasiirka arimaha dibada Xukuumadda Soomaaliya ayaa wuxu ka dhacay aqalka Baarlamaanka Soomaaliya.
Wasiirka gaashaandhiga Xukuumadda Soomaaliya ayaa Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya waxa ay weydiiyeen su’aalo la xiriira sababta maxkamada ciidamada qalabka sida ay uxirtay wariyaha Bbc-da ee Muqdisho.
C/xakiin Xaaji Maxamuud Fiqi ayaa Baarlamaanka Soomaaliya hortiisa uga jawaabay in sababta maxkamada ciidamada qalabka sida ay uxirtay wariyaha Bbc-da ay aheyd in wariyaha uu sameeyay warbixin dhaawacaysa sharafta Maxkamada ciidamada qalabka sida.
Sidoo kale Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay su’aalo weydiiyeen Ra’iisul Wasaare ku xigeen ahna Wasiirka arimaha dibada dalka Soomaaliya Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan,iyadoo su’aalaha la weydiinaye ay la xiriireen sababta ka dambeysay in la kireeyo safaarada Soomaaliya ee dalka Talyaaniga iyo hantida qaranka ee dalka dibadiisa ku maqan.
Ra’iisul Wasaare ku xigeen ahna Wasiirka arimaha dibada dalka Soomaliya ayaa ku jawaabtay inay kadaba tagi doonaan dhamaan hantida qaranka ee ku maqan dalka dibadiisa iyadoona sheegtay inay baaritaano ku wadaan sababta ka dambeysay in la kireesto safaarada Soomaaliya ee dalka Talyaaniga.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa umahadceliyay labada wasiir sida ay maanta usoo xaadireen kulanka Baarlamaanka iyo sida wanaagsan ee ay kaga jawaabeen su’aalaha la weydiiyay.
Danmark oo sheegtay in ay ka fiirsaneeyso dib u celinta qaxootiga Soomaalida dalkeeda ku sugan
Ninkani Balan-qaad ayuu u sameeynayaa Qofkii Shaqo usoo hela!! (Muxuu balan qaaday?)